Espaina : Fandresena eny an-kianja sy amin’ny Aterineto Ho Fanoherana ny Fandroahana · Global Voices teny Malagasy
Espaina : Fandresena eny an-kianja sy amin'ny Aterineto Ho Fanoherana ny Fandroahana	Voadika ny 14 Febroary 2013 4:34 GMT
Zarao: [Teny espaniola avokoa ny rohy.]
“Vokatry ny ezaka nataontsika izao fandresena izao. Nafana tokoa ny tambajotra serasera faramparany teo. Aoka hazava : antsika izao fandresena izao ary antsika ihany. » Izany ny fanambarana omaly, natao teo anoloan'ny foiben'ny Antokom-Bahoaka, nataon'ny mpitondra tenin'ny Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fiarahan'ireo nitolona an-taonany maro hanan-jò hanam-ponenana sy hanohitra ny fandroahana noho ny fakana ny antoka ao Espaina.
Tsy nampoizina ny fanambaran'ny Antokom-Bahoaka, minitra vitsivitsy monja talohan'izany nanaovana fanambarana izany, teo amin'ny Kongresy fa tsy manohitra ny handinihana ny Fandraisana an-tanana momba ny fanaovan-dalàna avy amin'ny vahoaka (ILP) navoakan'ny PAH hanovana ny lalàna mifandraika amin'ny fanaovana antoka ry zareo. Noraisina tamin'ny horaka sy tehaka izany vaovao izany : Sí, se puede [« Eny, azo tanterahina »],[no re] eny an-dalambe, ao amin'ny aterineto, tao sy manodidina ny Parlemanta, izay nandroahana mpikambana vitsy avy ao amin'ny PAH.
Saiky tsy nisy nitsipaka ny fandrotsaham-bato tamin'ny farany : 333 ny depiote nanaiky ny handinihana ny ILP. Iray ihany, mpikambana ao amin'ny Antokom-Bahoaka, no tsy nilaza ny heviny. Nahazo sonia 1.5 tapitrisa [arivoarivo] eo ho eo izay nangonin'olona an-jatony nandritra ny volana maromaro sy nanerana ny firenena ilay volavolan-dalàna (izay mitaky ny fahafahana manao solon'antoka, fanemorana ny fandroahana ary ny fananganana trano fonenana sosialy tsy misy mipetraka eo am-pelatanan'ny banky amin'izao fotoana).
Ny isan'ny sonia voangona manohana ilay volavolan-dalàna. Sarin'i @tomstomkitrur.
Na dia tsy nisy toy izany aza ny fanohanan'ny vahoaka, dia nanambara ny depioten'ny Antokom-Bahoaka, izay manana ny maro an'isa tanteraka fa hanakana io volavolan-dalàna io, raha manohana izany avokoa ny ambin'ny vondrona parlemantera. Azonao jerena amin'ny alalan'ny Twitter ny hevitr'izy ireo, izay nangonin'ny sehatra Que hacen los diputados [« Inona no ataon'ny depiote »].
Nilefitra ihany tamin'ny farany ny Antokom-Bahoaka ary nihemotra rehefa nahita ny hagoavan'ny fanerem-bahoaka, izay notanterahina indrindra andro maromaro izao tamin'ny alalan'ny fanentanana mahomby, #ILPescrache, nataon'ny PAH tamin'ny alahady teo, izay naka aingam-panahy tamin'ny hetsi-panoherana tany Arzantina. Nampalahelo ihany anefa ny andron'ny omaly fa voamariky ny famonoan-tena nataona mpivady efa retirety, tao Majorque, noho ny filazana fandroahana ny trano azony. Tsy mbola mazava tsara moa ny antontan'isa, fa tombanan'ny PAH fa ny ampahatelony mihoatra mahatonga ny famonoan-tena any Espaina dia misy ifandraisany amin'izany fandroahana izany. Nisy nilaza nandritra ny fihetsiketsehana tany Barcelone ny fahafatesan'ireo mpivady ireo.
Notontosaina tamin'ny alalan'ny fitaovana nomerika isan-karazany ahafahan'ny olom-pirenena mifandray amin'ny depioten'ny Antokom-Bahoaka, amin'ny alalan'ny tava Twitter (hita ao amin'ny lisitra iray avokoa), na kaonty Facebook, na mailaka na antso sofin-davitra, miangavy ny tsy hanarahana ny baikon-tsafidy sy mba hanaiky ny fandinihana ny ILP ny fanentanana #ILPescrache. Tafiditra anatin'ny tenifahatra be mpampiasa indrindra ao Espaina ireo tenifahatra nampiasaina ho amin'izany fanentanana izany (#ILPoALaCalle [« ILP na eny an-dalambe »], #ILPesDemocracia [« ILP no demokrasia »], #PPcriminales [« PP jiolahy »] ary #ImPAHrables .
Nahafahana nandefa tsy voizina sioka amin'ny vondrona depiote ahitana izao hafatra manao hoe « Hofidianareo ve ny ILP ? Sa aleonareo mampiroborobo ny fandroahana ? » ny habaka Querido diputado no desahuciado [« Ry Depiote hajaina tsy voaroaka »]. Misy ny fandraisana an-tanana hafa, ao amin'ny habaka Oiga.me, no manoloatra fahafaha-mandefa mailaka tsy voizina. Araka ny antontan'isa nataon'izy ireo, dia olona 7000 no nandefa hafatra nananontanona ny 1 tapitrisa ho an'ny depioten'ny Antokom-Bahoaka tao anatin'ny roa andro monja.
Azonao jerena ny lisitry ny fandraisana an-tanana isan-karazany napetraka ho fampiroboroboana izany fanentanana izany.
Indro ny sarin'ny Lapan'ny Moncloa, fonenan'ny filohan'ny governemanta, izay nivezivezy fatratra tao amin'ny tambajotra serasera :
[« 15 volana izao ny olona monina ato amin'ity trano ity no tsy nanao ny adidiny. Rahoviana ary izy no horoahina ? »] Sarin'i @elpadrecorajede.Nanomboka tamin'ny Asabotsy tamin'ny alalan'ny hetsika efa niantsoana olona tany amin'ny tanàna ambonivohitra espaniola 46, teo ambanin'ny lohahevitra manao hoe « Ho amin'ny zo hanam-ponenana sy manohitra ny fandripahana ara-bola » ny fanentanana fanerena hanekena ny ILP.
Nandresy teo amin'ny fifanandrinana voalohany ny PAH, fa tsy maintsy atao izay handresena ao anatin'ny fombafomban'ny fanaovan-dalàna.
Vakio amin'ny teny English, Français, Català, Ελληνικά, Español
FanoheranaHafanàm-po nomerikaMediam-bahoakaPolitikaToekarena sy FandraharahànaVaovao MafanaZon'olombelona